Job 15 KJV – Hiob 15 AKCB | Biblica
Job 15 KJV – Hiob 15 AKCB
Elifas Mmuae A Ɛto So Abien
1Na Temanni Elifas buae se,
2“Enti onyansafo de nsɛm a aba biara nni mu beyi nʼano
anaasɛ ɔde apuei mframa a emu yɛ hyew bɛhyɛ nʼafuru ma?
3Ɔde nsɛm huhuw begye akyinnye,
aka nsɛm a mfaso biara nni so ana?
4Wototo onyamesuro ase mmom
na wusiw Onyankopɔn som ho kwan.
5Wo bɔne kyerɛ wʼano nea ɔnka;
na woafa anitew tɛkrɛma.
6Wʼankasa wʼano bu wo kumfɔ, ɛnyɛ me de;
wʼankasa wʼano di adanse tia wo.
7“Wone onipa a wɔwoo wo dii kan ana?
Wɔwoo wo ansa na wɔrewo nkoko ana?
8Wutie Onyankopɔn afotu ana?
Wo nko ara na wunim nyansa ana?
9Dɛn na wunim a, yennim?
Nhumu bɛn na wowɔ a yenni?
10Nea wafuw dwen ne akwakoraa wɔ yɛn afa
wɔn a wɔanyinyin sen wʼagya mpo.
ne nsɛm a wɔka no brɛoo kyerɛ wo no sua ma wo ana?
12Adɛn nti na wo koma atwe wo akɔ
adɛn nti na wʼani asɔ gya,
13na woadan wʼabufuw agu Onyankopɔn so
na woma saa nsɛm yi pue fi wʼano?
14“Ɔdesani ne hena a obetumi ayɛ pɛ,
anaasɛ nea ɔbea awo no bɛn na obetumi ayɛ ɔtreneeni?
15Onyankopɔn nni ahotoso wɔ nʼakronkronfo mu
ɔsorosoro mpo nyɛ kronkron wɔ nʼani so,
16na me ne onipa debɔneyɛfo ne omumɔyɛfo a
ɔnom bɔne sɛ nsu.
17“Tie me, na mɛkyerɛ wo mu;
ma menka nea mahu nkyerɛ wo,
18nea anyansafo apae mu aka,
a wɔamfa biribiara a wonya fii wɔn agyanom hɔ no ansie
19(wɔn nko ara na wɔde asase no maa wɔn
bere a ananafo biara nni wɔn mu):
20Omumɔyɛfo kɔ ahohia mu, ne nkwanna nyinaa,
na basabasayɛni nso, ne mfe a wɔahyehyɛ ama no nyinaa.
21Nnyigyei a ɛyɛ hu hyɛ nʼasom ma;
na sɛ ɛyɛ sɛ nneɛma rekɔ yiye ma no a, akorɔmfo tow hyɛ ne so.
22Ɔpa abaw sɛ obeguan afi sum mu;
wɔabɔ no ato hɔ ama afoa.
23Okyinkyin hwehwɛ aduan;
onim sɛ sum da no abɛn.
24Ɔhaw ne ahoyeraw yi no hu;
ɛhyɛ ne so sɛ ɔhene a wasiesie ne ho ama ɔko,
25efisɛ ɔteɛteɛ ne nsa kyerɛ Onyankopɔn
na ɔma ne ho so tia Otumfo,
26wɔde nkatabo a mu piw na ɛyɛ den
kɔ ne so a, onsuro obiara.
27“Ɛwɔ mu sɛ srade ama nʼafono atotɔ
na nʼasen mu nam abubu agu so de,
28nanso ɔbɛtena nkurow a agu so
na watena afi a obi nte mu,
afi a ɛrebubu mu.
29Ɔrenkɔ so nyɛ ɔdefo bio, na nʼahonya rennyina,
na nʼagyapade so bɛtew na ayera wɔ asase so.
30Ɔrenguan sum no;
ogyaframa bɛhyew ne mman,
na Onyankopɔn anom ahomegu bɛsoa no akɔ.
31Ɛnsɛ sɛ ɔde ne ho to nneɛma huhuw so de daadaa ne ho,
efisɛ ɔrennya hwee mfi mu.
32Ansa na ne da bedu no, wobetua no ka a bi nka,
na ne mman renyɛ frɔmfrɔm.
33Ɔbɛyɛ sɛ bobedua a wɔaporow so aba a ennyin ɛ,
te sɛ ngodua a ne nhwiren reporow gu fam.
34Na abɔnefo fekuw a wonnim Onyankopɔn no rensow aba,
na ogya bɛhyew wɔn a wɔdɔ kɛtɛasehyɛ no ntamadan.
35Wonyinsɛn ɔhaw na wɔwo bɔne;
wɔn awotwaa siesie nnaadaa.”
AKCB : Hiob 15